Gịnị bụ Carbon Fiber Tubes Ji?
Carbon Fiber osisi
Carbon eriri tube
Faiba glaasi osisi
Faiba glaasi tube
Mkpụrụ Mkpụrụ osisi
High Pressure Posa osisi
Nhicha Mbara Igwe
Osisi nhicha windo
Ihe Ndị Ahịa Anyị Na-ekwu
Carbon eriri akpa tubular owuwu bara uru maka ọtụtụ ngwa. Ya mere, ọ gaghị eju anyị anya na ihe ndị pụrụ iche nke carbon fiber tubes na-etinye ha n'ọchịchọ dị elu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ọtụtụ mgbe ugbu a, carbon fiber tubes dochie ígwè, titanium, ma ọ bụ aluminom akpa na ngwa ebe ịdị arọ bụ ihe dị mkpa. N'ịtụle ihe dị ka ⅓ ịdị arọ nke tubes nke aluminom, ọ bụghị ihe ijuanya na carbon fiber tubes na-abụkarị mmasị na ụlọ ọrụ ndị dị ka aerospace, ụgbọ elu ndị na-arụ ọrụ dị elu, na ngwa egwuregwu, ebe ịdị arọ bụ ihe dị mkpa.
Njirimara Carbon Fiber Tube
Fọdụ ihe pụrụ iche na-eme ka eriri eriri carbon dị mma karịa tubes nke ihe ndị ọzọ gụnyere:
Uzo siri ike na idi-ike na idi-ike
Iguzogide ike ọgwụgwụ
Ọnọdụ nkwụsi ike sitere na ọnụọgụ dị ala nke mmụba ọkụ (CTE)
A na-emepụta tubes carbon carbon n'ụdị okirikiri, akụkụ anọ, ma ọ bụ akụkụ anọ, mana enwere ike ịmepụta ha n'ụdị ọ bụla, gụnyere oval ma ọ bụ elliptical, octagonal, hexagonal, or custom shapes. Roll-ọbọp prepreg carbon eriri akpa mejupụtara multiple eyiri nke twill na / ma ọ bụ unidirectional carbon eriri akwa. Roll-ọbọp tubes na-arụ ọrụ nke ọma maka ngwa ndị chọrọ nnukwu ekwe isi jikọtara na ala ibu.
N'aka nke ọzọ, a na-eme ka eriri eriri carbon carbon braid mejupụtara nke ngwakọta carbon fiber braid na akwa carbon carbon unidirectional. Igwe a kpara akpa na-enye njirimara torsional mara mma ma na-etipịa ike, ha dịkwa mma maka ngwa ngwa dị elu. Nnukwu dayameta carbon fiber tubes na-ejikarị rụọ ya site na iji eriri carbon na-agbanwe agbanwe. Site na ijikọta eriri ziri ezi, nhazi eriri, na usoro ịmepụta, enwere ike ịmepụta eriri eriri carbon na njirimara kwesịrị ekwesị maka ngwa ọ bụla.
Njirimara ndị ọzọ nwere ike ịdị iche site na ngwa gụnyere:
Akụrụngwa-Tubes nwere ike ịmepụta site na ọkọlọtọ, etiti, elu, ma ọ bụ ultra-high modulus carbon fiber.
Dayamita — Carbon fiber tubes nwere ike site na obere obere ruo nnukwu dayameta. Enwere ike ịchọta njirimara ID na OD maka mkpa ụfọdụ. Enwere ike ime ha na nha na metric nha.
Tapering-Carbon eriri akpa nwere ike tapered maka na-aga n'ihu isi ike na ogologo.
Mgbidi nke mgbidi — A pụrụ imepụta tubes ndị na-eji eriri fiber carbon eme ihe n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbidi nile site na ijikọta oyi akwa dị iche iche.
Ogologo-Roll-ọbọp carbon eriri akpa abịa na ọtụtụ ọkọlọtọ ogologo ma ọ bụ nwere ike wuru ka a omenala ogologo. Ọ bụrụ na ogologo nke a chọrọ ogologo karịa ka akwadoro ya, enwere ike ijikọ ọtụtụ tubes na splices dị n'ime iji mepụta tube toro ogologo.
Mpụga na mgbe ụfọdụ ime ime ime-Prepreg carbon eriri akpa a nwere cello-ọbọp gloss imecha, ma a ezigbo, sanded imecha dị, kwa. Braids carbon fiber tub na-ejikarị mmiri na-ele anya, na-egbuke egbuke. Ha nwekwara ike iji cello-ọbọp maka mmecha glossier, ma ọ bụ enwere ike ịgbakwunye ederede peel maka njikọta ka mma. A na-edozi eriri akpa carbon fiber dị ukwuu na ime na mputa iji kwe ka njikọta ma ọ bụ eserese nke elu abụọ ahụ.
Mpụga ihe-Iji prepreg carbon eriri akpa-enye ohere maka nhọrọ nke na-ahọpụta dị iche iche mputa n'ígwé. Oge ụfọdụ, nke a nwekwara ike ime ka onye ahịa ya họrọ ụcha mputa.
Carbon Fiber tube Ngwa
Enwere ike iji eriri eriri carbon maka ọtụtụ ngwa tubular. Fọdụ ihe eji eme ihe ugbu a gụnyere:
Robotik na akpaaka
Ngwá ọrụ Metrology
Fechaa dị fechaa
Formula 1 ọsọ ụgbọ ala mmiri
Site n'ibu arọ ha na ike na ike ha siri ike, jikọtara ya na ọtụtụ nhọrọ ndị a na-ahụkarị, site na usoro ịkpụzi ka ọ dị ogologo, dayameta, na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi nhọrọ agba, eriri eriri carbon bara uru maka ọtụtụ ngwa gafee ọtụtụ ọrụ. Ojiji nke eriri eriri carbon na-ejedebe naanị site n'echiche mmadụ!
Post oge: Jun-24-2021
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15 nke imepụta ahụmịhe bụ mmesi obi ike nke ngwaahịa anyị.